जिल्लामै फल्यो ९ करोडको सुन्तला, एक किसानको भागमा ६ लाख सम्म ! – Arthatantra.com
जिल्लामै फल्यो ९ करोडको सुन्तला, एक किसानको भागमा ६ लाख सम्म !
जाजरकोट । यस वर्ष जाजरकोटमा मात्रै नौ करोड रूपैँया बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्षभन्दा पाँच प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा श्रीराम घिमिरे जानकारी दिए ।
ढिमे, डाँडागाउँ, लहँ, खलङ्गा, खगेनकोट, पैक, झाप्रा, कार्कीगाउँ, पुन्मा, भुरलगायत गाविसमा सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । सुन्तलाखेतीको लागि अनुकूल मौसम भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको हो ।
जिल्लाको ३ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती विस्तार गरिएको छ । एक सय ८० हेक्टरमा नौ करोड १२ लाख रूपैँया बराबरको एक हजार ८ सय २४ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको घिमिरेले बताउँछन्।
सुन्तलाखेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू सुन्तलाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । सुन्तलाखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । कृषकले वार्षिकरुपमा एक लाखदेखि छ लाख रूपैँयासम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । सुन्तलाखेतीको पकेट क्षेत्र दम्दाला गाउँमा मात्र एक करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ ।
परम्परागत मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर लगाउने खेतबारीमा कृषकले सुन्तलाखेती गर्न थालेका छन् । कृषकले बोटबाटै सुन्तला प्रतिकिलो ५० रूपैँयामा बिक्री गर्दैआएका छन् । उक्त सुन्तला बजारमा ८० देखि ९० रूपैँयामा बिक्री हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला जुम्ला, डोल्पा, रुकुम, सुर्खेत तथा स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएको छ ।
२० पुस २०७३, रासस, ३।००